Daabacayaasha ayaa u ogolaanaya Adtech inay dilaan faa'iidooyinkooda | Martech Zone
Shabakaddu waa tan ugu firfircoon uguna hal abuurka badan waligeed. Marka markay tahay xayeysiinta dhijitaalka ah, hal-abuurka waa inuu ahaadaa mid aan xad lahayn. Daabacaha waa inuu, aragti ahaan, awood u yeeshaa inuu si weyn uga duwanaan karo xirmada warbaahinteeda daabacayaasha kale si uu ugu guuleysto iibinta tooska ah una gaarsiiyo la-hawlgalayaasheeda saameyn iyo waxqabad aan la qiyaasi karin. Laakiin iyagu ma yeelaan - maxaa yeelay waxay diiradda saareen waxa tiknoolajiyadda xayeysiinta ah ay ku oranayso daabiciyayaashu inay sameeyaan, oo aysan ahayn waxyaabaha ay dhab ahaan sameyn karaan.
Tixgeli wax fudud sida xayeysiinta joornaalka dhalaalaya ee caadiga ah. Sideed u qaadanaysaa awoodda bog buuxa, xayeysiis joornaal dhalaalaya ah isla markaana u keenaya isla khibraddan si aad u muujiso xayeysiin? Malaha ma jiraan siyaabo badan oo taas lagu sameeyo xaddidaadda Cutubyada xayeysiiska ee caadiga ah ee 'IAB', tusaale ahaan.
Xayeysiiska xayeysiiska ayaa isbeddel ku sameeyay iibsiga iyo iibinta xayeysiiska tobankii sano ee la soo dhaafay. Nidaamyada barnaamijku waxay ka dhigeen suuqgeynta dhijitaalka ah miisaan ka fudud sidii hore. Taasi way kacsan tahay, ugu horreyntii hay'adaha iyo khadka hoose ee tiknoolajiyada. Laakiin hawsha, waxay jartay wax badan oo hal-abuurnimo iyo saameyn ah oo ololeyaasha xayeysiinta taariikh ahaan caan ku ahaa. Waxaad kaliya ku habboonaan kartaa awoodda calaamadeynta ee leydi dhexdhexaad ah ama hoggaamiye.
Si loo gaarsiiyo ololeyaal dijitaal ah baaxad ahaan, tiknoolajiyada xayeysiiska ah waxay ku tiirsan tahay laba waxyaalood oo muhiim ah: jaangoynta iyo is-gaarsiinta. Labaduba waxay xannibayaan waxtarka iyo hal-abuurka xayeysiinta dhijitaalka ah. Adoo fulinaya heerar adag oo ku saabsan cabirka hal-abuurka iyo walxaha kale ee muhiimka ah, xayeysiiska xayeysiintu wuxuu fududeeyaa ololeyaasha dhijitaalka ah ee shabakadda furan. Tani waxay daruuri soo bandhigeysaa badeecadda soo bandhigidda alaabada. Marka laga eego aragtida astaanta, dhammaan alaabtu waa isku mid ama way ka siman yihiin, kordhinta sahayda iyo wadista dakhliga daabacayaasha.
Caqabada hoose ee soo galka goobta daabacaadda ee dhijitaalka ah ayaa keentay qarax ka dhashay agabka dijitaalka ah, taas oo xitaa ka dhigaysa mid adag in calaamadaha lagu kala saaro daabacayaasha. Bogagga wararka maxalliga ah, goobaha B2B, goobaha khaaska ah, iyo xitaa baloogyada ayaa ah la tartamaya shirkadaha waaweyn ee warbaahinta loogu talagalay xayaysiinta doollarka. Kharashka xayeysiiska ayaa aad u faafaa, khaasatan ka dib markii dulaaliyeyaashu qaniintooda qaataan, waxay ku adkeyneysaa niche iyo daabacayaasha yaryar inay sii noolaadaan - xitaa marka laga yaabo inay ka fiicnaadaan, ku habboon yihiin bartilmaameed la siiyay.
Intii ay ku guda jireen tallaabada qufulka ad adoo adeegsanaya tiknoolajiyada xayeysiiska ah, daabacayaasha ayaa ka tanaasulay faa iidada weyn ee ay ku lahaayeen dagaalka loogu jiro dakhliga xayeysiinta: Is-maamul buuxa oo ku saabsan boggooda internetka iyo xirmooyinka warbaahinta Daabacayaasha badankood si daacadnimo ah uma dhihi karaan inay jiraan wax ku saabsan ganacsigooda, marka laga reebo cabbirka dhagaystayaashooda iyo diiradda waxyaabaha ay ka kooban tahay, taas oo ka duwan.
Kala duwanaanshuhu wuxuu muhiim u yahay ganacsi kasta 'guul tartan ah; la'aanteed, fursadaha badbaadintu waa xun yihiin. Tani waxay uga tagaysaa saddex shay oo muhiim u ah daabacayaasha iyo xayeysiistayaasha labadaba inay tixgeliyaan.
Marwalba Waxaa Jira Baahi Halis ah oo Iibinta Tooska ah - Haddii noocyadu doonayaan inay ku soo bandhigaan ololeyaal saameyn sare leh khadka tooska ah, waxay u baahan doonaan inay si toos ah ula shaqeeyaan madbacadda. Shakhsi daabacaha wuxuu awood u leeyahay inuu fududeeyo ololeyaasha aan si fudud looga ganacsan karin webka furan. Maqaarka goobta, riixitaanka, iyo nuxurka leh waa qaar ka mid ah siyaabaha qibrada leh ee tan hadda loo marayo, laakiin helitaanka ikhtiyaariyada ayaa hubaal sii ballaarin doona sanadaha soo socda.
Daabacayaasha Savvy waxay heli doonaan dariiqooyin ay ku ballaadhiyaan bixinta hal-abuurka ah - Daabacayaasha casriga ahi ma sugi doonaan noocyada inay fikradaha u dejiyaan ololayaasha saamaynta sare leh. Waxay si firfircoon uga fikiri doonaan fikradaha cusub, waxayna heli doonaan habab ay uga shaqeeyaan xirmooyinka warbaahinta iyo garoomadooda. Kharashka ku saabsan fulinta ololahan ayaa shaki la'aan ku imaan doona qiimo, laakiin marka lagu daro ROI-yada sare, qiimaha ololayaasha noocan oo kale ah ayaa ugu dambeyntii hoos loo dhigi doonaa. Meel kasta oo ay ka jirto fursad lagu yareeyo kharashka suuqa, adeeg bixiye carqaladeeya ayaa ugu dambayn soo faragelin doona.
Madbacadaha iyo suuqleyda ayaa heli doona wadiiqooyin ay ku gaarsiiyaan ololeyaasha saameynta sare sicirka hoose - Madbacad kasta ama summad kasta ma laha miisaaniyadda si ay u abuurto ololeyaal caadaysan. Markay sidaa sameeyaan, waxaa jiri kara si lama filaan ah naqshadeynta iyo kharashyada horumarinta. Waqti ka dib, shirkadaha hal abuurka saddexaad waxay heli doonaan habab lagu yareeyo dhibaatooyinkaas iyaga oo soo saaraya ikhtiyaarrada hal abuurka ah ee daabacadaha iyo xayeysiiyayaashu ay iibsan karaan oo ay isticmaali karaan si ay u keenaan nooca saameynta iyo waxqabadka ay ku adkaan doonaan inay ku guuleystaan ​​haddii kale.
Is-u-huridda madax-bannaanida si aad ugu foorarsato Adtech waa soo jeedin lumis ah
Heerarka sare ee gujinta, ROI, iyo saamaynta sumadda dhammaantood waxaa si xun u saameeyay jaangoynta iyo badeecadda looga baahan yahay inay ka dhigto shaqada xayeysiinta miisaanka. Taasi waxay u fureysaa fursado cusub daabacayaasha iyo suuqleyda inay dib ula soo noqdaan hal-abuurnimadii iyo guushii ay mar iyagu lahaayeen.
Taageerayaasha tiknoolajiyada xayeysiiska ah shaki la’aan way ku doodi doonaan taas barnaamij xayeysiis labadaba waa lama huraan waana wax layaableh daabacayaasha iyo xayeysiiyeyaasha si isku mid ah maxaa yeelay waxay hoos u dhigeysaa qiimaha iibka waxayna siineysaa daabacado badan gabal gabal ah. Heerarku waa shuruudo farsamo si shaqadaas looga dhigo.
Shaki baa ku jira in daabacayaasha (kuwa wali taagan), ay si qalbi leh u oggolaadaan. Guusha Adtech waxay inta badan ahayd daabacaadda nasiib darrada. Laakiin waxay u taalaa isla kuwa daabacayaasha ah inay raadsadaan qaabab ay kula dagaallamaan iyagoo dib uga fikiraya qaabka ay u iibinayaan xayeysiinta.
Tags: ololayaasha xayeysiiskaxayeysiiska ku bixiqaybaha xayeysiiskaadtechxayeysiiyatignoolajiyadaIABbarnaamij xayeysiiscabirka xayeysiiska caadiga ahcabirka xayeysiiska soo bandhigida
Kenny Katzgrau waa agaasimaha guud ee Xayeysiiska Broadstreet iyo qoraaga Toban Faa'iido: Sidee Majaladaha iyo daabacayaasha warfaafinta ee Hyperlocal News ugu guuleysan doonaan xilligii Google iyo Facebook.